VOALAZA FA NATAO HAKANA TAOVA IREO VOASAMBOTRA
Vao tsy ela akory izay fa ny volana Jolay lasa teo no nanoratany lahatsoratra mikasika ny halatr’olona izay mampisahotaka ireo mponina any amin’iny Faritra Anjozorobe sy ny manodidina iny. Amin’izao fotoana dia voalaza fa voasokajy ao anatin’ny Faritra mena tanteraka ny ao Anjozorobe sy ireo tanana manodidina azy.
Araka ny vaovao maripototra voarainay dia miaina tanteraka ao anatin’ny tebitebiteby sy ny tahotra ny mponina ao an-tampon-tanan’Anjozobe sy ny manodidina amin’ny afitsok’ireo mpangalatr’olona any an-toerana ireo. Raha vao manomboka maizimaizina ny andro dia tsy misy sahy mivoaka ny trano intsony ny mponina ao ao an-tanana. Mangina tanteraka, araka izany, ny tanana tsy toy ilay Anjozorobe fahita tany aloha intsony.
Voalaza fa tovolahy efatra, mponina ao an-tanana ihany izay mandeha amin’ny ‘scooter’ indray amin’izao fotoana no misambotra izay olona sendra azy ireo. Ny sasany amin’izy ireo aza dia milanja masolavitra mihitsy hitiliana izay olona lavitra. Efa fantary ny mponina ihany ireo tovolahy ireo ary efa voasambotry ny fokonolona aza ny iray tamin’izy ireo kanefa dia votsotra. Araka ny fitantaran’ity mponina iray tafaresaka taminay, dia nafatotry ny fokonolona ity tovolahy ity ary natolotra ny zandary. Nony hitondra azy anefa ny Zandary dia niteny ity tovolahy ity hoe « aleo aloha hiantso ny deba …”. Nentin’ny Zandary izy io kanefa andro vitsy fotsiny taorian’io dia indro fa hitan’ny olona teo an-tanana nivezivezy teny indray. Araka ny voalazan’ireo fokonolona dia notambazan’ilay nantsoina hoe “deba” , vola 3 tapitrisa Ariary ireo mpitandro filaminana ka namotsitra ity tovolahy ity.
Araka ny feo mandeha any an-toerana dia voalaza fa misy tambazotra matanjaka dia matanjaka tokoa eny amin’ny faritry ny 67 HA eny izay hanaterana sy mandray ireo olona voasambotra. Ny vaovao azonay ihany dia toa hoe natao HAKANA TAOVA hono ny antony hisamborana ireo olona ireo. Tokony hojeren’ny tompon’andraikitra misahana izany akaiky ny fisian’io tambazotra manakarama olona hisambotra olona hakana taova io.
Very fanahy mbola velona, araka izany, ireo mponina ao Anjozorobe sy ny manodidina satria dia tsy hitan’izy ireo intsony izay hianteherana sy hamonjy, satria dia ireo mpitandro filaminana natao hiaro ny vahoaka indray no miray tendro sy tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy.
Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitry ny filaminana sy ny fanjakana ireo mponina ao Anjozorobe sy ny manodidina mba hijery akaiky izany toe-javatra mampalahelo izany any an-toerana fa mijaly izy ireo ary hanafay ihany koa ireo mpitandro filaminana izay miray petsapetsa amin’ny mpanao ratsy noho ny fitiavam-bola.